မေလအတွက်ဘယ်နေရာကိုသွားရမှာလဲ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 18/05/2021 10:25 | ခရီးသွားနေရာများ, လမ်းပြ
ဒီဆောင်းပါးမှာမေလဘယ်ကိုသွားရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ပြောချင်တယ်။ ထိပ်တစ်ဆယ်နေရာများ။ အကြောင်းပြချက်မှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ နွေ ဦး ရာသီဥတုသည်ကောင်းသောရာသီဥတုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအရာအလုံးစုံလုံလုံလောက်လောက်မရှိသကဲ့သို့အာရှတိုက်တွင်မိုးရာသီမှာမတည်မြဲသေးဘဲဆောင်းရာသီသည်တောင်အမေရိကတွင်မပေါ်ပေါက်သေးပါ။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစေသည် မေလမှာခရီးသွားရတာအရမ်းကောင်းတယ်။ ထို့အပြင်ဟိုတယ်များသည်များသောအားဖြင့်နွေရာသီထက်စျေးသက်သာပြီးနေရာများစွာတွင်ကျင်းပကြသည် fiestas အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ဤအရာအလုံးစုံကိုသင်ပေါင်းထည့်ပါက၊ ခရီးသွားareasရိယာများသည်ဇူလိုင်သို့မဟုတ်သြဂုတ်လထက်လူ ဦး ရေနည်းပါးသည်ဟုဆိုပါကသင့်တွင်မေလတွင်မည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်ကိုစဉ်းစားရန်အကြောင်းကောင်းများစွာရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဆယ်ခုပြသသွားကြသည်။
1 မေလမှာဘယ်ကိုသွားရမလဲ။ စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကနေဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေအထိအကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
1.1 ပရာ့ဂ်, မေလအတွက်သွားလာရန်ဂီတ ဦး တည်ရာ
1.2 ပေါ်တို - သင်မတူညီတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်မေလဘယ်မှာသွားရမယ်
1.3 Normandy, အံ့မခန်းကမ်းပါး၏ပြည်
1.4 Seville, အလွန်နီးကပ်ဇိမ်ခံ
1.6 ဆိုက်ပရပ်စ်, မြေထဲပင်လယ်အတွက်ရတနာ
1.7 La Palma, ကနေဒါကျွန်းများသို့ကွဲပြားခြားနားသောခရီးစဉ်
1.8 Bantayan, ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်း၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု
1.9 Cordoba, အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီးတီး၏ကျက်သရေ
1.10 ကော့စတာရီကာ, သဘာဝဥယျာဉ်များ၏မြေ
မေလမှာဘယ်ကိုသွားရမလဲ။ စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကနေဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေအထိအကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု
ကျွန်ုပ်တို့မှကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုမည့်နေရာများတွင်အိပ်မက်မက်သည့်ရှုခင်းများ၊ နှိုင်းယှဉ်။ မရသောကမ်းခြေများ၊ အထိမ်းအမှတ်များစွာနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျော်ကြားသောရိုးရာပွဲတော်များပါဝင်သည်။ မေလမှာသွားမယ့်ခရီးစဉ်ကိုသွားမယ်။
ပရာ့ဂ်, မေလအတွက်သွားလာရန်ဂီတ ဦး တည်ရာ
၏ခကျြဒေသ၏မြို့တော် ဘိုဟီးမီးယား ပထမဆုံးအနေဖြင့်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။ ယင်း၏ကြီးမားသောheritageရာမအမွေအနှစ်သည်အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်သာရှိသကဲ့သို့၊ မေလလယ်မှဇွန်လအစောပိုင်းအထိ၎င်းသည်ယင်းကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည် နိုင်ငံတကာနွေ ဦး ဂီတပွဲတော်။ ကြီးမားသောသံစုံတီးဝိုင်းနှင့်သရုပ်ဆောင်များသည်မမေ့နိုင်သောဖျော်ဖြေပွဲများပြုလုပ်ရန်မြို့တော်တွင်တွေ့ဆုံကြသည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ဂီတကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပါကဤပွဲတော်ကိုပျော်မွေ့ရန်ပရာ့ဂ်သို့သွားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ နှင့်စကားမစပ်, သွားရောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်မထားပါနဲ့ ရဲတိုက်နှင့် Mala Strana ခရိုင်ပရဂတ်ရဲတိုက်ကဲ့သို့အထင်ကရအဆောက်အအုံများကိုမြင်တွေ့ရမည့်နေရာ စိန့် Vitus ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဒါမှမဟုတ်အဖိုးတန် ချားလ်စ်တံတား။ ထို့အပြင်လမ်းလျှောက်ရန်မမေ့ပါနှင့် Staré Mesto, သင်တွေ့လိမ့်မည်သည့်အလယ်ခေတ်မြို့ မြို့တော်ခန်းမအဟောင်း ၎င်း၏ကျော်ကြားနက္ခတ္တဗေဒနာရီနှင့်အတူ။
ပေါ်တို - သင်မတူညီတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်မေလဘယ်မှာသွားရမယ်
ပေါ်တို, မေလအတွက်ခရီးသွားရန်ပြီးပြည့်စုံသော ဦး တည်ရာ
ဖြစ်ကောင်းပေါ်တူဂီအတွက်အလှဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ် လစ္စဘွန်း နှင့်တိုင်းပြည်အတွင်းအကောင်းဆုံးကမ်းခြေ၌ရှိကြ၏ အဆိုပါ algarve။ သို့သော်လည်း၊ Porto တွင်သင့်အားကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။ စတင်သူများအတွက်၎င်း၏မြို့ဟောင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ထိုကဲ့သို့သော၎င်း၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, စတော့အိတ်ချိန်း၏နန်းတော်, Clérigos၏ဘုရားကျောင်းနှင့်မျှော်စင်သို့မဟုတ် Duero မြစ်ကိုကျော်က၎င်း၏တံတားများစွာအဖြစ်ဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်။
ဒါ့အပြင်လှပသောလှေကားထစ်များကိုသင်ပျော်ရွှင်ခံစားနိုင်ပါတယ် ရီဘီရာသူတို့သည်လူကြိုက်များသောမုန့်ကိတ်မုန့်များနှင့်လူသိနည်းသော Port ဝိုင်များကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ သငျသညျအဆုံးစွန်သောအောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသိလိုလျှင်, သငျသညျ Duero ၏အခြားဘက်ခြမ်းရှိဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအများအပြားရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ပေါ်တူဂီမြို့၏ပြတိုက်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကြံပေး အလယ်ခေတ်၁၃ ရာစုမှ Casa del Infante တွင်တည်ရှိသည်။ တစ်ခု လျှပ်စစ်ကား၎င်း၏ဟောင်းနွမ်းသောယာဉ်များနှင့်အတူ Soares Reis အမျိုးသားရေးလုပ်ပါပေါ်တူဂီသမိုင်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးတစ်ခုဖြစ်သောပန်းပုဆရာ၏အမည်ကိုပေးသောပန်းချီကား၏အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုပြသထားသည်။
မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည် ပြင်သစ်နော်မန်ဒီအချိန်မှာလှတယ်။ အကယ်၍ သင်လည်ပတ်လျှင်၎င်းကဲ့သို့သောချောက်ကမ်းပါးများတွေ့လိမ့်မည် É။, ဒါပေမယ့်လည်းလျစ်လျူရှုကြောင်းရိုင်းကမ်းခြေ အင်္ဂလိပ်ချန်နယ် နှင့်အခြားအံ့သြဖွယ်ရှုခင်းများ။
သမိုင်းဝင်မြို့ကြီးတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ် Ruanမီးလောင်ရာနေရာဖြစ်သည် Arc ၏ဂျုံး ၎င်းတွင် Gothic စတိုင်ရတနာကျောက်မျက်ရတနာကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏ Lady of ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ Saint-Ouen ၏ Abbey နှင့် Saint-Maclou ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ထင်ရှားသော Gothic ၏ဥပမာနှစ်ခုနှင့်ဟိုတယ်ဒီ Bourgtheroulde ၏လှပသောအဆောက်အအုံသည် Renaissance ပုံစံသို့ကူးပြောင်းသွားသည်။
နော်မန်ဒီတွင်သင်မလွတ်နိုင်သည့်နောက်ထပ်လည်ပတ်မှုတစ်ခုမှာ သည် Le Havreအဘယ်သူ၏သမိုင်းဝင်စင်တာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ၎င်း၏ထူးခြားသော Renaissance ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ Saint-Joseph ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏မီးအိမ်မျှော်စင်နှင့်အခြားအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များအတွက်။
သို့သော်ထိုထက် ပို၍ နော်မန်ဒီကိုမသွားဘဲမသွားနိုင်ပါ Mont Saint-Michel ကျွန်းဒီရေဒီယိုထွက်သွားသည့်အခါနှင့်ကာရင်ဂျီးနီးယား၊ ရိုမေ့စ်နှင့် Gothic စတိုင်များကိုပေါင်းစပ်ထားသောအထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်ဘင်နီဒစ်ဂျီဘီဂျီ Abbey တည်ရှိရာ၎င်း၏ကျွန်းအခြေအနေကိုချန်ရစ်ထားသည်။
စပိန်နိုင်ငံမှမေလတွင်မည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်ကိုရွေးချယ်ရန်လည်းမလိုပါ။ Andalusian မြို့တော်သည်နွေ ဦး ရာသီ၌ပျော်မွေ့ရန်ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Seville မှာမင်းရဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး တွေရှိတယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၎င်း၏မနည်းအံ့သြဖွယ်နှင့်အတူ Giralda; အဆိုပါ ရွှေမျှော်စင် သို့မဟုတ် ရီးရဲလ် AlcazarGothic နှင့် Mudejar စတိုင်များကိုပေါင်းစပ်ထားသောရတနာ။
ပိုပြီးခေတ်မီပေမယ့်မနည်းအံ့မခန်းဖြစ်ပါတယ် စပိန်ရင်ပြင်၁၉၂၉ ခုနှစ်၏ Ibero-American Exposition အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္withာန်ကိုစွဲမှတ်စေသည်။ ဒါ့အပြင်လှပသောရပ်ကွက်များကဲ့သို့လမ်းလျှောက်ဖို့မမေ့ပါနှင့် Triana ဒါမှမဟုတ်၏ Santa Cruz နှင့်အဖိုးတန်သည် Maria Luisa ပန်းခြံ.
သို့သော်ထို့အပြင်ခုနှစ်, Seville ဤအချိန်တွင်အခြားဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ မေလအစတွင်သူသည်ကျော်ကြားခဲ့သည် ပြသ, ရိုးရာအလင်းရောင်နှင့်သင်စပျစ်ရည်နှင့်မြေ၏ဂီတခံစားနိုင်ဘယ်မှာအတူ။
နယူးယောက်သို့သွားရန်ဘယ်တော့မျှမပျက်ကွက်နိုင်သောခရီးစဉ်အတွက်သင့်အားဖိတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနိုင်ငံများနှင့်တိုက်ကြီးများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲကြသည်။ မည်သည့်အချိန်မဆို "သွားရန်မြို့ကောင်း" သို့သွားရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်သည်သင်၏ခရီးကိုစတင်နိုင်သည် Times Squareကြီးမားသောဖန်သားပြင်၏ကျော်ကြားသောစတုရန်း။ ထိုအခါသင်သည်အဓိကအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဘရွတ်ကလင်း o Harlemနှင့်ဖြတ်သန်းသွားလာရကြ၏ ဗဟိုပန်းခြံ သို့မဟုတ်အတွက်ပြပွဲကြည့်ပါ ဘရော့ဒ်ဝေး.
ဒါပေမယ့်မင်းလုပ်နိုင်တာကိုရပ်တန့်ပစ်လို့မရဘူး Liberty ၏ရုပ်ထု, အ Ellis ကျွန်းကမ္ဘာတစ်လွှားမှနိုင်ငံသားများသည်အမေရိကန်အိပ်မက်ကိုရှာဖွေရန်နှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သောအမေရိကန်အိပ်မက်ကိုရှာဖွေရန်၊ အနုပညာ၏မြို့တော်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးမျိုးဖြစ်သည်။
ယခင်ဇာတ်ကောင်နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်တွင်သင်ယခုကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးလိုသောနေရာရှိသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်သည်ပြိုင်ဘက်ကင်းသည့်သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်များနှင့်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောကမ်းခြေများနှင့်ရှုခင်းများကိုစုံလင်သောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် Nissi y Makronissosရေငုပ်ခြင်းလေ့ကျင့်နိုင်သည့်နေရာ။
အမွေအနှစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် စိန့် Irakleidios နှင့်ကဲ့သို့သောအလယ်ခေတ်ရဲတိုက်များ Kolossi, လာမယ့်ရန်, San Juan ၏အမိန့်၏ Knights ကတည်ဆောက်ခဲ့သည် အသင်းတော်များ သူများကဲ့သို့ Troodos အစုလိုက်အပြုံလိုက်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ တိုင်းပြည်၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ နီကိုစီယာသင့်တွင်အံ့မခန်းဖွယ်ပြတိုက်တစ်ခုရှိပြီးသင်ကကျွန်း၏သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကို Neolithic မှ Ottoman ခေတ်အထိလေ့လာနိုင်သည်။ သို့သော်သင်မပြုမီ အလယ်ခေတ်မြို့ရိုး ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့တံခါးများမှတဆင့်ဝင်ရောက်သောမြို့ဟောင်းကိုဝန်းရံသော Venetians ကတည်ဆောက်ခဲ့သည် Famagusta.
La Palma, ကနေဒါကျွန်းများသို့ကွဲပြားခြားနားသောခရီးစဉ်
La Palma ပေါ် Roque de los Muchachos
မေလတွင်မည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်နည်းဟူသောမေးခွန်းကိုဖြေရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြားကျွန်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ ကရာရီကျွန်းစုများတွင်အနည်းဆုံးလူသိများသော La Palma အကြောင်းပြောပြပါမည်။ သို့သော်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများ၊ အိပ်မက်များကမ်းခြေများနှင့်ပုံမှန်မြို့များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
အဖြစ်လူသိများ "လှပသောကျွန်း"အကယ်၍ သင်လည်ပတ်ပါကသဲသောင်ပြင်များကဲ့သို့ပျော်မွေ့နိုင်သည် Naos ဆိပ်ကမ်း, အစိမ်းရောင်ရေအိုင် o Los Cancajos။ သို့သော်စိမ်းလန်းစိုပြေသောရော်ဘာသစ်တောများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအံ့မခန်းမီးတောင်များ ငါလမ်းညွှန်တစ်ခုရှိခဲ့တယ် သို့မဟုတ် Caldera က de Taburienteတစ်ခုလုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်ကိုဖန်တီးခဲ့တာန်းကျင်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အတွက် Santa Cruz de la Palmaကျွန်းရဲ့မြို့တော်၊ မင်းမှာအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး တွေရှိတယ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနှင့်စန်တိုဒိုမင်ဂိုတို့၏အသင်းတော်များကဲ့သို့သောအားသာချက်များ Castillo က de စန်တာ Catalina သူကဲ့သို့သောမြင့်မြတ်သောအိမ်တော် Sotomayor နန်းတော် သို့မဟုတ် Salazar ၏အဓိကအိမ်.
ကောင်းမွန်တဲ့အားလပ်ရက်တစ်ခုမှာနေထိုင်ဖို့အတွက်အာရှဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပဲ ဒီတိုက်ကြီးအပေါ်အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ငံများ ၎င်းတို့သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောနေရာများနေထိုင်ရာနေရာဖြစ်သော်လည်းမေလတွင်သွားလိုသည့်နေရာသည်ကမ်းခြေတစ်ခုရှိသင့်သည်ဆိုလျှင်ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်း Bantayan သို့ထွက်ပြေးရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ ၎င်း၏အိပ်မက်ကမ်းခြေများအနက်ကျနော်တို့၏အကြံပြုပါသည် Kotaသဲ၏လျှာနှင့်၎င်း၊ သကြား၊ ၏ နတ်ဘုံနတ်နန်း ဒါမှမဟုတ်သင်၌တွေ့နိုင်ပါသည်သောပို။ ပင်ကြမ်းတမ်း အပျိုစင်ကျွန်းထိုဒေသရှိလှေငယ်များငှားရမ်းခြင်းဖြင့်သင်ရနိုင်သည် bangka.
Bantayan မှာလုပ်စရာအများကြီးမရှိဘူး။ အထက်ဖော်ပြပါသဲfromရိယာများအပြင်သင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည် Omagieca Obo-Ob ဒီရေတော Ecoparkအထင်ကြီးလောက်သောဒီရေတောများ၏သဘာဝနေရာ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မေလတွင်သွားလိုသည့်နေရာများအတွင်း၌၎င်းသည်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည် ပိုကောင်းတဲ့ကမ်းခြေများနှင့်ပိုပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု.
Andalusian မြို့ကို Cordoba ကိုလည်ပတ်ဖို့အချိန်ကောင်းပါပဲ။ အချည်းနှီးမဟုတ်သည်မှာ၎င်းသည်ကြေငြာမှုအရှိဆုံးသူများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး။ နီးပါးမလိုအပ်သောကျနော်တို့က၎င်း၏အံ့မခန်းအကြောင်းကိုသင်ပြောပြသောကွောငျ့ဖွစျသညျ Mနည်းနည်းလက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ယူဆချက်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း; ၎င်း၏ရောမအမွေအနှစ်၏, သင်ဆဲသွားရောက်နိုင်သည်ရှိရာ၎င်း၏ဂျူးရပ်ကွက်၏ Casa က de Sefarad နှင့် တရားစရပ်; ၏ အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဗတ် သို့မဟုတ်ပြုရန်တွန်းအားပေး ခရစ်ယာန်archကရာဇ်၏ Alcazar.
ထိုနည်းတူစွာ၊ မြို့ပြင်၌သင်ရှုပ်ထွေးနေသည် မက်ဒီနာ Azaharaဂရာနာဒါရှိ Alhambra ဘေးတွင်စပိန်ရှိမွတ်စ်လင်မ်ဗိသုကာများ၏ထိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မေလလအတွင်းကာဒိုဘာသည်၎င်းကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်ဖြစ်သည် အဆိုပါ Patios ၏ပါတီကြေငြာခဲ့သည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ Intangible အမွေအနှစ်နှင့်လည်း မေကူးပွဲတော်.
မေလမှာဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတာစာရင်းပြီးအောင်သွားလိုတဲ့အမျိုးအစားကိုလုံးဝပြောင်းလိုက်ပြီ။ ကော့စတာရီကာသည်၎င်း၏ကြွယ်ဝသောသဘောသဘာဝကိုထင်ရှားစေသည်။ သင့်၌ရှိသည်ဤသက်သေပြ၏ကောင်းသောသက်သေ အမျိုးသားဥယျာဉ်ကွန်ယက်အချို့သောတောင်တန်းများနှင့်အချို့သည်ကမ်းရိုးတန်းလွင်ပြင်အလယ်တွင်ရှိသည်။
အရင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကြည့်ရှုရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည် အဆိုပါ Arenal မီးတောင်ကနေတ o Irazúကနေတစ်ခုစက္ကန့်အဖြစ်, နေစဉ်, သူတို့ဖြစ်ကြသည် အဆိုပါ Cahuita၎င်း၏သန္တာကျောက်တန်းများနှင့်၎င်း၏စိုစွတ်သောအပူပိုင်းသစ်တောနှင့်အတူ; Barra Honda ကနေတစ်ခုယင်း၏ဂူ, ဒါမှမဟုတ် ကာရာ၎င်း၏ဇာတိသစ်ပင်များနှင့်အတူ။
အဆုံးစွန်သောအကွာအဝေးတရာအကွာအဝေး စန်းဟိုစေး, တိုင်းပြည်၏မြို့တော်။ ၎င်းတွင်ကဲ့သို့သောကောင်းမွန်သော neoclassical အဆောက်အ ဦး များကိုလည်းတွေ့နိုင်သည် အဆိုပါ Moor ၏ရဲတိုက်, စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်း ဒါမှမဟုတ်၏ အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် မြို့တော်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း နှင့်အသင်းတော်များ ကရုဏာတော်, အ အထီးကျန် နှင့် ကာမဲန်။ ကော့စတာရီကာရှိအခြားနေရာများကိုသင်သိလိုပါကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းပါသည် ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ.
နိဂုံးချုပ်လျှင်, သင်အံ့ were ခဲ့ကြပါ ဘယ်မှာမေလအတွက်ခရီးသွားလာထိုအခြိနျတှငျသူတို့၏အရညျအသှေးဆုံး၌ရှိသညျ့ခရီးဆကျ ၁၀ ခုကိုကြှနျုပျတို့ဖျောပွခဲ့ပွီ။ ယခုသင်ရွေးချယ်မှုသည်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွားနေရာများ » မေလမှာဘယ်ကိုသွားရမလဲ။ အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု